Otu esi emelite LG G4 na gam akporo 6.0 | Gam akporosis
Alfonso de Frutos | | Gam akporo Root, LG, ROM
N'oge na-adịghị anya Google wepụtara koodu isi maka ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ ya, ndị na-emepụta nnukwu ihe malitere ikwusa nke ngwaọrụ ga-enweta mmelite ahụ echere ogologo oge. LG nọ n'etiti ha ma kwe nkwa na LG G4 ọ ga-emelite ngwa ngwa. O yikwara ka ha ga-emezu nkwa ha.
Ma ọ bụ na site na saịtị mmepe XDA nbudata ihe onyonyo maka ụdị nke LG G4 (H815) nke ụwa adịlarị. Y’oburu na inwere LG na mgbọrọgwụ ị nwere ike iwunye gam akporo 6.0 M na-enweghị na-eche maka ukara update.
LG G4 ga - abụ otu n’ime ekwentị izizi iji nweta Android 6.0 M
Nke a leaked version bụ a n'ụzọ zuru ezu ọtọ chịkọtara, naanị otu ma bụ na ị gaghị enwe ike ịlaghachi gam akporo 5.1 ozugbo ị rụnyere ọhụrụ version nke Google sistemụ nrụọrụ. Ihe owuwu a nke Android 6.0 M maka LG G4 na-egosipụta Mba.ombre 20A ma dị na usoro KDZ, usoro LG, ọ bụ ezie na ọ na-emegharị ka enwee ike ịmalite site na iji mgbake mgbake.
Ndị ọrụ na-enweghị LG G4 gbanyere mkpọrọgwụ ma ọ bụ ndị na-ahọrọ ichere maka mmelite ọrụ, kwuo na n'ezie onye nrụpụta Korea ga-amalite idokwa gam akporo 6.0 M na LG G4 n'ime izu a.
Ọ pụtara na ị ga-enweta gam akporo 6.0 M na LG G4 gị n’izu a? O doro anya na ọ bụghị. LG ga-ewepụta mmelite ahụ n'ụzọ ọgbụgba ya mere o nwere ike were ihe dị ka izu abụọ iru ụdị niile.
Cheta na nke a bụ naanị maka LG G4 n'efu, n'ihi ya, ndị ọrụ ahụ nwere ụdị agbakwunyere onye ọrụ ekwentị mkpanaaka ga-echere mmelite maka ụdị ha ka ewepụtara ha, nke a nwere ike were ọnwa ole na ole.
Ọ bụrụ na ị nwere LG G4 n'efu ma gbanye mgbọrọgwụ ma ịchọrọ melite ya na gam akporo 6.0M ị ga - agbaso usoro ndị ahụ Guysmụ okorobịa si XDA na-agwa gị na njikọ a ma ị nwere ike imelite ekwentị gị ugbu a na ụdị kachasị nke sistemụ arụmọrụ nke Mountain View team.
Dị ka atụrụ anya Anyị abụghị ndị ọrụ na ihe omume nke na ekwentị na-a paperweight n'oge usoro. Nzọụkwụ ndị a dị nnọọ mfe ịgbaso, mana ọ bụrụ na i doghị anya banyere isi ihe ọ bụla, ị ga-eche ka ọbịbịa nke mmelite ndị ọrụ nke LG G4 na gam akporo 6.0 M.
A kụrụ aka maka LG na-emezu nkwa ya. Emeputa ama ama maka ditching ahịa ma ọ bụ were eons iji melite ngwaọrụ ha. Ha enyela anyị nnukwu ihe ijuanya na mbata nke gam akporo 5 ma ọ dị ka onye na-emepụta Korea ga-aga n'ihu na-eme ihe ma melite igwe ya site na nke mbụ. Ọ dị mma maka LG!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Ọ bụrụ na ị nwere mgbọrọgwụ LG ị nwere ike iwunye gam akporo 6.0
Ogbe 26 dijo
adabere na ihe nlereanya
Zaghachi Sergio Garcia
BlackBerry Priv ọ ga-aga nke ọma n'ahịa ahụ ma ọ bụrụ na ọ na-efu euro 699?
Etu esi eziga WhatsApp na olu gị ekele Google Ugbu a. Dịkwa maka Telegram na Hangouts